Aad iyo aad u badan koritaanka gadhka ragga maalmahaan qabow. Ka warran CBD Daryeelka Garka? • Dawooyinka Inc.eu
Saliida gadhka ayaa aad caan u noqotay sanadihii la soo dhaafay iyada oo rag badani ay hoos u dhigeen mandiilladooda oo ay doorteen muuqaal raganimo leh oo gadhka kor u kacaya. Bishan Diseembar waxaan sidoo kale u aragnaa Messrs Saint Nicholas iyo Santa Claus inay yihiin rag gadh leh.
1 Waa maxay saliidda CBD?
2 Faa'iidooyinka CBD Gadhka Saliida
2.1 CBD miyuu kobciyaa timaha iyo koritaanka gadhka?
2.2 Waxay ka caawisaa ka hortagga timo luminta
2.3 Waxay fuuqbaxaysaa xargaha timaha
2.4 Nadiifi maqaarka gadhka hoostiisa
2.5 Sida loo codsado saliida CBD
CBD sidoo kale waxay ku sii kordheysaa caan ka ahaanshaha adduunka oo dhan maaddaama sharciyeynta xashiishadda iyo waxyaabaha la xiriira xashiishka ay noqdaan kuwa caadi ka noqda adduunka oo dhan.
Layaab ma leh, markaa, in shirkaduhu go'aansadeen inay labadooduba midoobaan oo ay abuuraan saliidaha gadhka ee CBD.
Waa maxay saliidda CBD?
Saliida CBD ama cannabidiolsaliidu waa maado aan cilmi nafsi ahaaneed ka soo bixin dhirta xashiishka. CBD kuma sarraysiin karto, CBD waxay leedahay faa'iidooyin aan caadi ahayn. Waxaa la muujiyey inay yareyneyso xanuunka daba dheeraada, yareynta welwelka, iyo ka caawinta cudurka macaanka caafimaadka wadnaha waxayna ka caawisaa astaamaha kansarka. Kaliya maahan wax la yaab leh caafimaadka jirka, waxay sidoo kale kor u qaadaa caafimaadka timaha. Maaddaama ay si weyn ugu shaqeyso timaha madaxa, waxay kaloo hagaajineysaa xaaladda timaha gadhka.
Faa'iidooyinka CBD Gadhka Saliida
Dabcan, marka shey cusub oo CBD uu soo galo suuqa, waa muhiim inaad sameyso cilmi baaristaada kahor iibsiga.
Ragga qaarkiis waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay gadhka sii kordhaan maqaarka xun ama timaha dhibaatada leh. Ragga sidoo kale waxay fiiro gaar ah u leeyihiin koritaanka gadhka, sidoo kale iyagoo kaashanaya CBD. Ninka gadhka leh wuxuu isticmaali karaa saliidan si uu u helo dhererka, cabirka iyo dhalaalka uu waligiis rabay.
CBD miyuu kobciyaa timaha iyo koritaanka gadhka?
Saliida CBD muddo dheer ayaa loo maleynayay inay faa'iido weyn leedahay markay tahay caafimaadka timahaaga iyo hagaajinta koritaanka timaha. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in saliidaha CBD ay ka kooban yihiin asiidh dufan oo dhameystiran: Omega-9, Omega-6 iyo Omega-3. Tan oo ay weheliso fitamiin E-ka sarreeya waxay kordhisaa jilicsanaanta madaxaaga iyo xoogga timahaaga.
CBD miyuu kobciyaa timaha iyo koritaanka gadhka? (afb)
Saliida CBD dhamaanteed waa dabiici, waxay wanaajisaa wareegga taas oo kicinaysa koritaanka timaha iyo koritaanka gadhka, way qoysaa oo waxay ka caawisaa bogsiinta waxyeello kasta oo madaxa gaadha waxayna siisaa timaha xoog u oggolaanaya borotiinka ku jira timaha inuu kobco.
Waxay sidoo kale kobciyaan wareegga dhiigga, taas oo ka dhigaysa mid caafimaad leh follicle. Xididdada caafimaadka leh ayaa timo dheer sii kororta. Kaliya maahan in loo isticmaali karo gadhka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa timaha madaxaaga. Waa fikrad wanaagsan in la ogaado haddii waxyaabaha timaha ee CBD ay ku caawin karaan, maxaa yeelay timo luminta ragga ayaa badanaa bilaabata 30-jirkooda.
Waxay ka caawisaa ka hortagga timo luminta
Waxyaabaha ku jira borotiinka ee saliida CBD iyo quwadiisa qoyan waxay layaab ku tahay timaha gadhka ee durba ku sii koraya bannaanka foosha. Timaha oo ku daata gadhka ayaa caan ku ah jabitaanka. Xuubka timaha ee qallalan oo jajaban waxay u egyihiin inay u jajabaan sida burcadka oo kale, iyagoo kaa tegaya wax mug iyo dherer ah.
Saliidu waxay timaha ka dhigeysaa mid ku xoog badan qoyaan iyo borotiin, taasoo timaha ka dhigeysa inay jaban yihiin. Saliida wanaagsan ee CBD waxaad ku yareyn kartaa jajabka oo waxaad ku kori kartaa gadh dheer, oo buuxa. Haddii aad dhibaato ku qabtid koritaanka timaha madaxaaga burburka awgiis, saliidu halkaas ayey ka shaqeyn doontaa si loo joojiyo jabitaanka sidoo kale.
Waxay fuuqbaxaysaa xargaha timaha
Qoyaanka ayaa fure u ah ka hortagga jajabka iyo kobcinta koritaanka cusub. CBD waa huuriye awood badan maxaa yeelay waxaa ku jira fitamiin E. Faytamiin E waa mid ka mid ah qaboojiyayaasha ugu fiican ee dabeecadda ay bixiso. Waxay u fiicantahay maqaarka, gadhka iyo timaha madaxa. Qoyaanka ma aha oo kaliya inuu gadhkaagu xoog yeesho, waxay kaloo ku dareysaa dhalaal raaxo leh wuxuuna gadhkaaga ka dhigayaa mid jilicsan.
Gadh dheer, oo buuxa ayaan u qalmin haddii timuhu cuncun yihiin oo qallafsan yihiin. Aan ku xuso, lamaanahaaga ayaa kaaga mahad celin doona wejiga jilicsan ee sanjabiisha ka buuxaan. Saliida ayaa waliba timaheeda baal marisa una ogolaata qaab fudud. Haddii aad tahay taageere shaaribbo qurux badan iyo qaabaynta gadhka, saliidda CBD way ka sii adkayn doontaa tan.
Nadiifi maqaarka gadhka hoostiisa
Maqaarka gadhka hoostiisa ayaa muhiim u ah sida timaha gadhka laftoodu. Waxay ka kooban tahay xididdada timaha ka dhiga inay koraan, taas oo ay tahay in si fiican loo daryeelo. Saliida CBD waxay ku dhacdaa godadka iyada oo aan la xirin, taas oo kor u qaadeysa koritaanka timaha. Haddii aad dhibaato maqaar leedahay, saliidu sidoo kale waxay kaa caawin kartaa xaaladaha maqaarka sida:
Suurtagal ma aha in la ilaaliyo gadhka caafimaadka qaba iyada oo aan daryeel fiican loo helin maqaarka hoostiisa. Haddii gadhkaagu cuncun yeesho, maqaarkaaga oo saliidaynta ayaa xallin doonta dhibaatadaas, lagumana dhici doono inaad dhammaantood iska xiirto si aad raaxada ugu hesho. Haddii aad leedahay finan ama cambaar, saliidu waxay kaa caawin kartaa yareynta raaxo la'aanta iyo muuqaalka. Xitaa waad u isticmaali kartaa wajiga intiisa kale haddii aad arrimahaan ku leedahay meel kale oo maqaarkaaga ah. Sidoo kale maahan dufan, sidaa darteed waad u xoqi kartaa si raaxo leh habeen iyo maalinba.
Sida loo codsado saliida CBD
Saliida sifiican ugama shaqeyn doonto haduu gadhkaagu wasakh leeyahay oo duban yahay. Hubso inaad marka hore nadiifiso gadhkaaga, oo la doorbido saabuunta gadhka. Saabuunta aan loo sameynin garka waxay timaha ka jari kartaa saliidaha dabiiciga ah ee aad ugu baahan tahay timaha caafimaadka qaba. Ku shubo 3-4 dhibcood oo saliidda CBD ah gacmahaaga; xoogaa yar oo aad horey u sameysay. Haddii aad leedahay gadh buuxa, waxaad u baahan kartaa dhibic kale ama laba.
Saliida ku xoq gadhkaaga iyo maqaarka hoostiisa. Xoqidda aagga ayaa sidoo kale wanaajisa wareegga dhiigga saliidduna si fiican ayey u shaqeysaa. Saliida mari mari subaxda iyo fiidka si aad uhesho saameynta ugu fiican. Laakiin haddii aad codsato maalintiiba hal mar sidoo kale si fiican ayey u shaqeyn doontaa. Waxa kale oo ay leedahay caraf macaan oo gadhkaaga ku haysa saacado.
Ilaha waxaa ka mid ah GetDapr (EN), MaryJaneLabs (EN)
CBDsaliid cbdcaafimaad lehcaafimaadkaKirismassaliida cannabis
Daawada modafinil oo caan ka ah ardayda
Ritalin ka dib, daroogo kale oo caan ah ayaa ka dhex muuqda ardayda jaamacadda. Daawada modafinil - ...
Hagaha Microdosing ee bilowga ah
Microdosing waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u shaqeyso oo aad isu dheelitirnaato. Waxaan ku jawaabeynaa ...
CBD oo ah isuduwaha melatonin
Dhibaatooyinka ay keento dawada hurdada ee melatoninku way badan yihiin. Madax xanuun, shuban biyood iyo wadno garaac ayaa aad u yar ...